मनोरन्जन Archives - नेपाल कुरा
मनोरन्जन गृहपृष्ठमा जानुहोस् :
शिल्पाका पति राजको आज सुनुवाई हुँदै
एजेन्सी । अश्लील फिल्म बनाएको आरोपमा पक्राउ परेका शिल्पाका पति राज कुन्द्राको जमानतको लागि आज सुनुवाई हुँदैछ । उनीमाथि अश्लील चलचित्रहरू बनाएको र केही एप्सहरुमा अपलोड गरेको आरोपमा पक्राउ परेका थिए । पक्राउ परेपछि अदालतले राजलाई हिरासतमा राख्न अनुमती दिएको[…..]
के बलिउड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन दोस्रो पटक आमा बन्न लागेकी हुन् ?
काठमाडौं । बलिउड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चनको केही तस्बिरहरुले अहिले सामाजिक सञ्जालमा तातिरहेको छ । उनी आफ्नी छोरी आराध्या र श्रीमान् अभिषेक बच्चनका साथ आफ्नो को–स्टार सरथ कुमारको घर पुगेकी थिइन् । सोही क्रममा केही तस्बिरहरु शरथ कुमारकी छोरी र[…..]
कोरोनाका कारण नेपाली चलचित्रले झण्डै दुई वर्ष गुमायो, अझै कति गुमाउनु पर्ने हो ?
प्रकाशित मिति: ११ श्रावण २०७८, सोमबार July 26, 2021 , संवाददाता: Yukta
काठमाडौँ । कोरोनाको संक्रमणका कारण अहिले सबै क्षेत्र पूर्णरुपले ध्वस्त भएको छ त्यसमध्ये पनि सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र चलचित्र क्षेत्र हो। लकडाउन खुलेसँगै अरु क्षेत्र केहीरूपमा क्रियाशील भए पनि चलचित्र क्षेत्र खुल्ने कुनै टुङ्गो लागेको छैन । दर्शकको साथ आवश्यक[…..]
‘मुन्द्रेको कमेडी क्लब’ भोली बाट प्रशारणमा आउने
काठमाडौं । ‘मुन्द्रेको कमेडी क्लब’ भोली बाट प्रशारणमा आउने भएको छ । कोरोनाका कारण बन्द रहेको कमेडी शो ‘मुन्द्रेको कमेडी क्लबु’ भोलि बाट प्रसारणमा आउने भएको हो । शोलाई नियमित प्रसारणमा ल्याउने तयारीका साथ स्वास्थ्य मापडन्डको नियम पालना गर्दै छायाँकन[…..]
राज कुन्द्रा घटनाः अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी सोधपुछको क्रममा धेरै पटक रोइन्, पुलिसले सोधेका थिए यस्ता प्रश्नहरु !
मुम्बई । राज कुन्द्रा अश्लील घटनाको मुद्दामा फसेपछि अपराध शाखा टोलीले शुक्रबार राज कुंद्रा र शिल्पा शेट्टी कुन्द्राको बंगलामा छापा मारे । यस्तैमा अपराध शाखाले अश्लील सामग्रीको मुद्दामा अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी कुन्द्राको बयान पनि रेकर्ड गरेको छ । यस सोधपुछको[…..]
काठमाडौं । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले गायक प्रकाश सपूत र गायिका सुनिता दुलाललाई ‘विपद् जोखिम सद्भावना दूत’ घोषणा गरेको छ । सिंहदरबारमा एक समारोहकाबीच प्राधिकरणका प्रमखु कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेलले प्रमाणपत्र दिएर उनलाई एक वर्षका लागि ‘विपद्[…..]
पल र मलिकाको जोडी अब चलचित्रमा
काठमाडौँ । ‘फूलबुट्टे सारी’ र ‘टाढा भए पनि’ बोलका दुई गीतमा पल र मालिकाको जोडी रुचाइए पछि दुवैलाई लिएर फिल्म बनाउने निर्माताहरुको नाम अगाडी आइरहेको छ । यसैमा थपिएको छ, गोपीकृष्ण मुभिज । गोपीकृष्णको फिल्म मध्येको एक ‘पर्खी बसेँ २’मा[…..]
एजेन्सी। अहिले फेरि गायिका नेहा कक्कड गर्भवती भएको खबर चर्चामा आउन थालेको छ । नेहा र रोहन एक दोस्रोलाई निकै प्रेम गर्छन् । उनीहरु अक्सर आफ्नो प्रेम सामाजिक सञ्जालबाट अभिव्यक्त गर्ने गरेका छन् । केहीदिन पहिले दुबै एयरपोर्टमा देखिएका थिए[…..]
काठमाडौं । कमेडी च्याम्पियन सिजन २ का प्रतिस्पर्धी भतरमणी पौडेललाई छ लाख रुपैया राशीको पुरस्कार घोषणा गरिएको छ । पौडेललाई गृह जिल्ला ताप्लेजुङका सांसद् तथा पूर्व मन्त्री योगेश भट्टराईको अग्रसरता र संयोजनमा सो पुरस्कार घोषणा गरिएको हो । भट्टराईले व्यक्तिगत[…..]
चर्चित शो ‘सुपर डान्सर’ को सुटिङमा गइनन् शिल्पा
प्रकाशित मिति: ५ श्रावण २०७८, मंगलवार , संवाददाता: hina
काठमाडौं । सोमबार राती पोर्न फिल्म कारोबारको आरोपमा शिल्पा शेट्टीका पति राज कुन्द्रा पक्राउ परेका छन् । पक्राउपछि बलिउड नायिका शिल्पा आज ‘सुपर डान्सर च्याप्सर४’ को शुटिङ्मा गइनन् । आगामी साता प्रसारण ‘सुपर डान्सर’ शोमा अब शिल्पा देखिने छैनन् ।[…..]